Ọ bụrụ na ị zụrụ a otutu ngwa ihe karịrị afọ ị doro anya nwere ụfọdụ na ị na-adịkwaghị eji. Nke a bụ nanị otu n'ime ihe ndị mere nwere ike ị chọrọ ka ihichapụ ngwa site iCloud. Ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ na-agụnye;
Ị nwere ike mkpa mepụta ohere na ngwaọrụ gị
Ụfọdụ nke ngwa ị nwere ike aghọwo abaghị uru na-ị na ị chọrọ tufuo ha ebe ọ bụ na ị na-adịghị eji ha
Ị nwekwara ike chọrọ ka ihichapụ ụfọdụ ngwa ná mgbalị na adị ngwaọrụ gị
N'agbanyeghị ihe ọ bụla kpatara ya bụ, i nwere ike zoo ma ọ bụ ihichapụ ụfọdụ nke ngwa data gị iCloud. Ke ibuotikọ emi anyị ga na-achọ na ụfọdụ n'ime ụzọ i nwere ike ime nke a n'ụzọ dị mfe.
Part 1. Olee iji Hichapụ achọghị égwu-adịgide adịgide site iCloud
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ị nwere ike ghara ihichapụ ngwa site iCloud n'ihi iCloud adịghị echekwa ọ bụla nke gị ngwa. Ihe ị na-ahụ na iCloud bụ akụkọ banyere ngwa ịzụrụ. I nwere ike zoo ụfọdụ n'ime ngwa ọdịnala na ndepụta a ka anyị ga-ahụ anya. Ị nwere ike Otú ọ dị ihichapụ ụfọdụ nke ngwa data echekwara na iCloud na ọ ga-enwe otu mmetụta nke gwakwara elu ohere na ọsọ ọsọ ngwaọrụ gị. A bụ otú;
Nzọụkwụ One: Ẹkedori Ntọala ngwa na ngwaọrụ gị na gbadaa na chọta iCloud. Enweta na iCloud imeghe ya.
Nzọụkwụ Abụọ: Enweta na Nchekwa & ndabere na mgbe ahụ Jikwaa Nchekwa
Nzọụkwụ atọ: Chọta "Documents na Data" na mgbe ahụ họrọ ngwa ị ga-achọ ka ihichapụ data maka.
Nzọụkwụ anọ: Enweta na Dezie
Nzọụkwụ ise: Enweta na Nhichapụ Button na-ekpe nke faịlụ ị ga-achọ ka ihichapụ. Ị ga-kpaliri n'ịkwado nhichapụ.
Nzọụkwụ isii: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ ihe niile enweta na hichapụ ihe niile na mgbe ahụ gosi na nhichapụ.
The usoro n'elu kwesịrị inyere gị aka inwe obere bit nke ohere nchekwa na ngwaọrụ gị. Ka anyị hụ otú ị nwere ike zoo ma ọ bụ Unhide ngwa ọdịnala na iCloud.
Part 2. Olee otú iji zoo ngwa ọdịnala na iCloud
Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ zoo ngwa ọdịnala na iCloud.
Nzọụkwụ Otu: na ngwaọrụ gị gaa App Store> Mmelite> zụrụ. Ị kwesịrị ị na-ahụ ihe niile na ngwa ọdịnala na ị zụrụ depụtara.
Nzọụkwụ Abụọ: na kọmputa gị, na-aga iTunes na mgbe ahụ iTunes ụlọ ahịa. Pịa "zụrụ" n'aka nri ị ga-ahụ gị zụọ ihe mere eme.
Nzọụkwụ atọ: Hover na ngwa ị ga-achọ ozuzo na ị ga-ahụ ihe X-egosi na elu nke ngwa si akara ngosi.
Nzọụkwụ anọ: Nanị pịa na "x" zoo ngwa.
Gị zụrụ ndepụta ga-emelitere na ị ga-ahụ na ngwa ị zoo bụ agaghịkwa na ndepụta
I nwekwara ike Unhide zoro ezo ngwa ọdịnala na-esote ngalaba anyị na-aga ịhụ otú ị pụrụ isi mee nke a n'ụzọ dị mfe.
Part 3. Olee otú iji Unhide ngwa site iCloud
Soro ndị a dị nnọọ mfe iji Unhide ngwa ọdịnala na iCloud.
Nzọụkwụ Otu: na kọmputa gị na-aga iTunes na mgbe ahụ abanye n'ime akaụntụ gị. Pịgharịa gaa na ala ruo mgbe ị na-ahụ "View Zoro ịzụrụ" na pịa ya.
Nzọụkwụ Abụọ: Ozugbo e Pịa na égwu Tab na ị ga-ahụ ihe niile na ngwa ị zoo. Dị pịa na "Unhide" button ọzọ na ngwa Unhide ya.
Part 4. Otu Pịa onwe elu karịa nchekwa na gị iPhone / iPad
Anyị na-ama hụrụ na isi ihe mere ị ga-achọ ka ihichapụ ma ọ bụ zoo ngwa nwere ọtụtụ ihe na-eme na-achọ onwe elu karịa ohere na N'ihi ya mma gị na ngwaọrụ ịrụ ọrụ. Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ị pụrụ onwe elu karịa nchekwa n'ime nanị otu click? Kechioma n'ihi na ị na e nwere onye na ngwa na-eme ihe a na ndị ọzọ n'ihi na ị.
Enye gị ohere ka ihichapụ onwe ozi tupu ere ya ere, imegharị ihe maka iji ma ọ bụ inye onyinye gị ochie iPhone
-Enye gị ohere ihichapụ kpam kpam faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ
Ị nwekwara ike ịhọrọ ihichapu ụfọdụ faịlụ ma ọ bụ ihichapu ngwaọrụ na-adịgide adịgide
Ọ na-arụ ọrụ ikpochapụ onwe data na free-elu ohere
-Enye gị ohere ọcha si junk faịlụ na 1-pịa dị ka anyị ga-ahụ n'okpuru ebe
Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ ọcha ngwaọrụ gị na 1-click.
Nzọụkwụ otu: Download na Wụnye Wondershare Nchekwa nchicha gị na kọmputa. Gbaa ndị Mmemme na mgbe ahụ Jikọọ na ngwaọrụ gị gị PC eji USB cables. Ị ga-ahụ ndị na-esonụ window.
Nzọụkwụ Abụọ: Na nke a bụ isi Ohere họrọ 1-click nzacha na mkpocha.
Ngwa ga-ozugbo amalite ka iṅomi ngwaọrụ gị
Nzọụkwụ atọ: Ozugbo Doppler zuru ezu, ọnụ ọgụgụ nke junk faịlụ ga-egosipụta na nke pụrụ ịkpata window. Pịa "nzacha na mkpocha" onwe elu ụfọdụ nchekwa.
Na-na ngwaọrụ gị ejikọrọ site na dum usoro iji hụ na niile junk faịlụ na-kpochara elu. Ozugbo usoro na dechara ị ga-ahụ ndị na-esonụ na windo na-egosiputa nchekwa ọmụma na ngwaọrụ gị.
> Resource> iCloud> Olee otú iji Hichapụ ngwa site iCloud